Nezvedu - Hebei Tomato Viwanda Co., Ltd.
"Hunhu Kutanga" inogara iri chirevo chedu kugadzirisa nyanya nyanya. Fekitori yedu inovhara nharaunda yemamirimita mazana mashanu makumi masere neshanu, nemazana mashanu emazana emamirimita, yazvino kugadzirwa kuri matani makumi matanhatu nemazana matanhatu, isu tine 9 makedheni matomatisi matama uye sachet matomatisi ekugadzira mitsara, ayo anogona zvigadzirwa zvemhando dzese, senge Flat sachet nyanya nyanya 40g, 50g, 56g, 70; Standup sachet nyanya nyanya 50g, 56g, 70g, 140g, 200g, 400g zvichingodaro; Tin kurongedza nyanya nyanya 70g, 140g, 170g, 210g, 230g, 380g, 400g, 420g, 425g, 770g, 800g, 850g, 1kg , 2.2kg, 3kg, 3.15kg uye 4.5kg. Misika yedu mikuru iEurope, Africa, Middle East, USA neSouth America nyika.
"Zvakanakisa mbishi kugadzira kunaka kuravira!" Isu tine yepamusoro mhando kutonga pane iyo inogadzira
kufora uye kupa yekutanga-kirasi sevhisi kune vatengi vane yakasimba technical technical rubatsiro. Tinoshuvira kuwedzera misika yakawanda pamwe neshamwari dziri pasi rese kuti tigadzire ramangwana rakajeka pahwaro hwekubatsirana.